I-China Precision yoku-Uncoiling kunye nokuLungelelanisa
Inkcazo:Ukujonga ngokungachanekanga kwaye uqonde,Ukungafaki kunye nokuLungisa,Isisongeli esikhulu sombonisi oPhezulu,Ukuhambahamba kubahambi,Ukukhohlisa kunye nokuLula,Umthengisi ongafezekisi
Home > Imveliso > I-Decoiler Straightener > Ukujonga ngokungachanekanga kwaye uqonde
Iintlobo zeMveliso ze- Ukujonga ngokungachanekanga kwaye uqonde , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ukujonga ngokungachanekanga kwaye uqonde , Ukungafaki kunye nokuLungisa ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umatshini wokudibanisa ngqo isixhobo se-Combo  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokudibanisa ngqo isixhobo se-Combo
Umatshini we-Combo ocacileyo we-Decoiler straightener Machine iIntegrated nge- uncoiler kunye ne-straightener , uyilo lokonga indawo, olulungele ukuhanjiswa kweshiti yensimbi emdaka . I-rooluls ephezulu yokusebenza yamkela isixhobo sokulungelelanisa...
KwiChina Ukujonga ngokungachanekanga kwaye uqonde Abaxhasi
Ukuvula ngokungaphezulu kwaye ukuwaqondisa kuyilelwe kwiimfuno zomsebenzi othe tye, ikakhulu kwiimveliso zombane.
Izixhobo ezinqwenelekayo ziyasebenzisana, ialuminiyam, ubhedu kunye nentsimbi engenanto kunye nokunye.
Inokukhupha kwaye ilule i-coil sheet sheet ukusuka kwi-50-600mm, kunye nobunzima ukusuka kwi-0-1-1.5mm, ubunzima bekhoyili ukusuka kwi-300kgs ukuya kwi-2000kgs.
Ngoxinzelelo lwe-pneumatic kulungelelwaniso lomgama othe tyaba kunye nomgangatho ongaphantsi we-worm, unokufezekisa ukuchaneka kokusebenza ngokuthe ngqo kohlobo oluninzi lwezinto ezincinci zeshidi yensimbi.
Ukujonga ngokungachanekanga kwaye uqonde Ukungafaki kunye nokuLungisa Isisongeli esikhulu sombonisi oPhezulu Ukuhambahamba kubahambi Ukukhohlisa kunye nokuLula Umthengisi ongafezekisi Ukujonga ngokuthe tye Ukudityaniswa okungafakwanga kunye neStraightener